Calanka Habar Jeclo, Laasqoray
Laasqoray, 2 Nov 2012 (AllDhooftinle.com)
Gawaadhida Dagaalka ee Somaliland Waxay Hadda Ku Sugan yihiin Magaalada Badhan.
Beesha Aadan Siciid oo ka mid ah beelaha Warsangeli waxay ka mid ahayd beelaha ka muraara-dilaacay sida uu Suldaanka Guud ee Sanaag u qaybiyey tiradii iyaduba yicista ahayd ee laga siiyey xildhibaanada Somaliweyn.
Markaasi beesha Adan Siciid waxay u galeen Somaliland iyagoo odayadoodii wata, halkaasoo ay raalli gelin badan iyo dhabano ka dhunkasho badan kula dul dhaceen madaxdii Soomaliland.
Isku soo wada duuboo waxay ka soo heleen Caasimada Somaliland ee Hargeysa macdan la yaab leh, oo ay ka mid yihiin hal booyad, hal gaadhi oo waaraad ah oo xamuulka iyo sanaada qaada iyo saddex Gaawadhida Gaashaaman ee Cabdi Bilaha loo yaqaano ah oo ay saaran yihiin qorayaha darandooriga u dhaca iyo hub iyo saanad kala noocnooc ah.
Waxa kaloo Soomaliland u qortay ilaa 150 inan oo Aadan Siciid ah oo askar laga dhigayo.
Waxa kaloo macdantaa iyo hubkaa sii dheer oo la soo siiyey saddex gaadhi oo ah Toyota Land Cruiser nooca loo yaqaan Layla Calawi.
Wararka ka soo baxaya reer Somaliland ayaa iyana sheegaya in dhammaan Ciidamada Badda Somaliland heegan la geliyey iyo weliba iney dhanka bada mareen dhawr laash oo ah kuwa dheereeya oo iyana ku sii jeedda aagga magaalada Laasqoray.
Wararku waxay intaa ku darayaan iney Somaliland qorsheysay iney magaalooyinka reer Laasqoray ku qabsato xoog iyo nidaamkii Laascaanood lagu qabsaday, inkastoo aan weli la maleyn kareyn iney Somaliland heli karto Warsangeli sida Jaamac Siyaadka ah.
Waxa laga yaabaa ciidamo kale oo iyaguna u dhaanteynaya Puntland iyo meelo kale iney dhowaan soo gaadhaan carrigaa Sanaag.
Odayaal fara badan ayaa aad uga dhiidhiyaya cawaaqib xumada iyo nabad gelya xumida ka iman karta hubkaa iyo Ciidamadaa Soomaaliland u dhaanteynaya.
Cabdalle Xaaji Saalax Bootaan Aljacfari